About Us - Shandong ZhongPeng Special Ceramics Co., Ltd
Shandong ZhongPeng Special Ceramics Co., Ltd. (ZPC) iri nyanzvi kambani aidaro mukurima, R & D uye rokutengesa soro-waivako nesilicon carbide zvigadzirwa, RBSiC / SiSiC (Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide).
Shandong ZhongPeng Special Ceramics CO., LTD zvinoiswa pamusoro watengwa nyika. fekitari Our ndokwenguva nzvimbo 60000 mativi metres iri Weifang, Shandong, China. Tine chinoshamisa pamwe chete muzvinadzidzo yunivhesiti dzomunharaunda anoita kudzidza kupisa nemishonga ematongerwo. ZhongPeng Company ndiyewo tsvakurudzo umbowo kuyunivhesiti vemo. Main muchiso iri 'ZPC'. Tine zvedu nyanzvi tsvakurudzo uye kukura chikwata kushumira mutengi.
With makore anopfuura 10 'kugadzirwa ruzivo, chikwata chedu kwezvinhu aigona kupa 3D Migumisiro vanodhirowa magadzirirwe kwavo kamwene uye pfapfaidzo nekuongororwa kuedza. zvigadzirwa dzedu dzine yakanaka yokuti mamiriro izvo zvinogona nechokwadi kukwikwidzana unongotaura. zvigadzirwa edu akafanana zvakafanana zvigadzirwa kubva kuGermany uye United States.